Iindaba-Ezimbini zeTekhnoloji ye-IR ekude
Xa kusiziwa kuthethathethwano ngexabiso, umthengisi okude we-IR uthi imveliso iyabiza kakhulu ngelixa umthengi esoloko esithi kubiza kakhulu. Nangona kunjalo, inqanaba lenzala lomthengisi linokusondela kwiipesenti ezi-0. Kukho izizathu ezi-2. Ngapha koko, akufuneki ukuba sithethe nje ngenzuzo kuphela kodwa kufuneka sithathe iteknoloji ithathele ingqalelo. Thina baseYangkai ukude asinakho ukubonelela ngexabiso eliphantsi kwimarike, oyena nobangela kukuba siqhubeka nokutyala imali kwiR & D. Ngenxa yoko, ulawulo lwethu olukude lubhetele kunabanye kumgangatho. Ndilandele ukuze uqonde itekhnoloji yesibini engundoqo ye-IR ekude.
Ukuthetha ngokubanzi, kude i-IR inamalungu ama-2. Inxalenye enye kukuhambisa. Eyona nto iphambili kweli candelo yidiode ye-infrared emitting diode. Yidayode ekhethekileyo apho izinto zahlukile kwidiode eqhelekileyo. Amanqanaba ombane athile aya kongezwa kuzo zombini iziphelo zedayidi ukuze ivule ukukhanya kwe-IR endaweni yokukhanya okubonakalayo. Okwangoku, indawo ekude ye-IR kwintengiso isebenzisa idiode ehambisa ubude be-IR kwi-940nm. Idiode iyafana nedayode eqhelekileyo ngaphandle kombala. Omnye umenzi we-IR okude akanakho ukuyazi kakuhle le teknoloji. Ukuba ubude be-IR abuzinzanga, ukuhanjiswa kwesiginali ekude kuya kuchaphazeleka. Elinye icandelo lelokufumana umqondiso. Ukufumana i-diode engafakwanga infrared kudlala indima kulomsebenzi. Ubume bayo bungqukuva okanye busikwere. Ukubuya kwamandla ombane kufuneka kongezwe, okanye, akunakusebenza. Ngamanye amagama, ukufumana i-infrared diode kufuna ukusetyenziswa okungagungqiyo kovakalelo oluphezulu. Ngoba? Ngenxa yamandla okuhambisa asezantsi e-infrared diode diode, umqondiso ofunyenwe yi-infrared efumana i-diode ibuthathaka. Ukomeleza inqanaba lokufumana amandla, ukugqitywa kokufumana i-infrared diode kusetyenziswa iminyaka yakutshanje.
igqityiwe i-diode yokufumana i-infrared ineentlobo ezimbini. Umntu osebenzisa iphepha lesinyithi ukukhusela umqondiso. Enye isebenzisa iplastiki. Zombini zinezikhonkwane ezi-3, i-VDD, i-GND kunye neVOUT. Ukulungiswa kwezikhonkwane kuxhomekeke kwimodeli yayo. Nceda ujonge kwimiyalelo enikezwe ngumenzi. I-diode yokufumana i-infrared efumeneyo inenzuzo, abasebenzisi banokuyisebenzisa ngokulula, ngaphandle kovavanyo oluntsonkothileyo okanye indawo ebiyelweyo. Kodwa, nceda nikela ingqalelo kwithambeka lokuhambisa le diode.